Home/Posts/Uncategorized/Carabta Caraf - Rugta Rugta ah ee Hyperbaric
Tekna wuxuu leeyahay Real Chambers Real on Display! Waa mid aad u mashquulsan maalinta saddexda ah Carwada Caafimaadka Carabta iyo Congress 2018! Waxaan ka baqaynaa jawaabta togan ee aan ku helnay xarunteena 3 Cimilada Monoplace Hyperbaric Chambers iyo 3 iyo 6 Aagagga Madaweynaha Isbeddellada Isbeddellada. 2018 waxay noqon doontaa sannadka aadka u mashquulsan ee loogu talagalay gudaha gudaheenna ASME-PVHO Gawaarida Gawaarida iyo Qeybaha wax soo saarka. Fadlan soo gal oo soo arag ugu dambeyntii Chamber of Hyperbaric Tiknoolaji Tekna wuxuu leeyahay a Hybrid 4000 Qolka Hyperbaric on bandhig ee booth Z1.C02 Halkan!
Carabta Carabtu waa ururinta ugu weyn ee daryeelka caafimaadka iyo xirfadlayaasha ganacsiga ee gobolka MENA. Daabacaadda 2018 ee dhacdada ayaa la filayaa inay soo dhaweyso wax ka badan shirkadaha 4,200 iyo shirkadaha 103,000 ee ka socda wadamada 150 +.
Soo dhaweynta bandhigga wuxuu noqon doonaa ganacsiga 19, hogaaminta iyo waxbarashada sii wadista dheeraadka ah (CME) oo bixinaya casriyeynta ugu dambeysa iyo aragtida hababka jarista, farsamooyinka iyo xirfadaha.
Caafimaadka Carabta 2018 ayaa ka dhici doonta 29 January - 01 February 2018. Bandhiggu waa bilaash inaad booqato haddii aad iska diiwaangeliso kahor bandhigga!